Soo dejisan Adaware Antivirus Pro 12.6.997.11652 – Vessoft
WindowsAmnigaAntivirusesAdaware Antivirus Pro
Bogga rasmiga ah: Adaware Antivirus Pro
Adaware Antivirus Pro – waa antivirus oo taageera tiknoolojiyada casriga ah si looga ilaaliyo xajinta, fayraska iyo cybercrime. Software wuxuu isticmaalaa mashiinka farsamada casri ah oo ka yimaada horumarinta caanka ah ee alaabta amniga, iyo modulekiisa gaarka ah ee antispyware ee ilaalinta dhamaystiran oo ka dhan ah adware, afduubayaasha macluumaadka qarsoodiga ah iyo been-abuurka online. Adaware Antivirus Pro wuxuu taageersan yahay farsamooyinka falanqaynta farsamooyinka software ee nidaamka software kaas oo kuu ogolaanaya inaad la socoto ficilada codsiyada heerkulka habsami-u-socodka si loo xakameeyo raadkooda xun ee kombiyuutarka. Dab-damis la dhisay ayaa kormeeraya taraafikada soo socota iyo kuwa socda, iyo habka amniga emailka ayaa lagu ogaanayaa farriimaha khatarta ah ee farriimaha boostada. Adaware Antivirus Pro ayaa weeraro phishing ah, waxay gartaa website-yada laga shakiyo waxayna ilaaliyaan isticmaalaha inta lagu jiro iibsiyada internetka. Sidoo kale, Adaware Antivirus Pro waxay awood u leedahay in ay ku dhejiso daroogooyinka macluumaadka dibadda ah sida dhejinta USB ama kaararka xusuusta ee khayaanada.
Raadinta shabakada nabadda iyo bangiga internetka
Kormeerka hawlaha shabakada
Soo dejisan Adaware Antivirus Pro
Faallo ku saabsan Adaware Antivirus Pro
Adaware Antivirus Pro Xirfadaha la xiriira